Ubungakanani obuqhelekileyo be-assay umlilo : 5g / I-20G / 30G / 40G / i-45G / 50G / I-50G / 65G / 65G / 65G
Ubungakanani besayizi kunye nemizobo yamkelekile . Iisampulu zasimahla ziyinto yokuvavanywa kwabathengi .
Endaweni yokubonelela ngokusetyenziswa okungatshatanga, i-XTL ivele kwaye ibonelela ngovavanyo lokuvavanya i-clay kunye negama elihle lokusebenzisa uninzi lokusebenzisa. Uluhlu lwethu oluqhelekileyo lwe-assoy scoys esokhlisayo ukusuka kwi-30G ukuya kwi-65g kungafunwa i-5g-fun-fuids kwaye ngamanye amaxesha inokuphinda isetyenziswe ngaphezulu kwamaxesha angaphezu kwama-9 ngefomula ye-fluula. Eli nqaku libonelela abathengi bethu ngezibonelelo ezibalulekileyo zokunciphisa iindleko kunye nokwanda kwengeniso. Kwaye ngokobungakanani bomthengi, ubume kunye nolunye nkcazo, uyilo kunye nokubonelela.
Into: I-Assay yeFumo Indawo: Izixhobo ezizenzekelayo
Uhlobo lwenkqubo: Ukuqengqeleka Izatifikethi: ISO 9001 Sgs
Izixhobo: Sio2 + Al23o3 Ukuhambisa ngenqanawe: Izitokhwe ezininzi, ixesha lokuhambisa malunga neentsuku ezingama-5-10. ngolwandle okanye ngomoya njengokucela umthengi
Ukunyamezelana: +2mm Ukuhanjiswa& Inkonzo: